Fitsaboana amin'ny hopitaly :: Efa mandray marary hafa, ankoatra ny Covid-19, ny eny Anosiala • AoRaha
Fitsaboana amin’ny hopitaly Efa mandray marary hafa, ankoatra ny Covid-19, ny eny Anosiala
Miverina amin’ny fandraisana marary hafa ankoatra an’ireo tsaboina amin’ny valanaretina Covid-19 ny hopitaly Anosiala. Izy no toe-ram-pitsaboana voalohany natokana nandraisana ireo olona noahiahiana sy efa nitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19, tamin’ny volana janoary sy febroary. Tsiahivina fa ireo olona avy any Shina no noraisin’ny hopitaly voalohany, toy ireo mpianatra nandranto fianarana tany ka niverina teto an-tanindrazana.
Niroso tamin’ny fanadiovana faobe ny hopitaly ireo mpiasa rehetra teny an-toerana, tamin’ny 4 septambra lasa teo, mialoha izao fanokafana ny toerana ho an’ireo marary hafa ireo izao.
“Nanomboka nandray ireo marary tsy mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 ny sampan-draharaha rehetra, tamin’ny 7 septambra lasa teo. Niverina nisokatra manomboka, androany (Ndrl: omaly), ny sampandraharaha misahana ny fandidiana rehefa niato nandritra ny fito volana. Olona telo no niatrika fandidiana androany (Ndrl: omaly)”, hoy ny Dr Razafimahatratra Rado, talen’ny hopitaly Anosiala.
Notsindriany fa mbola misy mararin’ny Covid-19 efatra ao amin’ ny hopitaly, amin’izao fotoana izao. Manana fahasarotana avokoa izy ireo. Mitokana ireo mararin’ny Covid-19 ireo fa tsy mitambatra amin’ ny marary hafa.